प्रदेश भन्छ पोजेटिभ, केन्द्र भन्छ नेगेटिभ – कुनै पनि कोरोना संक्रमित भेटिएको छैन : प्रवक्ता डा. देवकोटा – HostKhabar ::
प्रदेश भन्छ पोजेटिभ, केन्द्र भन्छ नेगेटिभ – कुनै पनि कोरोना संक्रमित भेटिएको छैन : प्रवक्ता डा. देवकोटा
काठमाडौं : नेपालमा हालसम्म ६ जनामा मात्र कोरोना भाइरसको संक्रमण भेटिएको छ। छैटौं संक्रमित बिरामीको विषयमा बिहीबार जानकारी दिइएको हो। शुक्रबार थप नयाँ संक्रमित नभेटिएको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. विकास देवकोटाले जानकारी दिए।
विभिन्न मिडियामा पोखरामा कोरोना पोजेटिभ रिपोर्ट आएको भन्ने खबर आएको छ’, प्रवक्ता देवकोटाले भने, ‘पोखरामा कुनै पनि केस पुष्टि भएको छैन।’ प्रवक्ता देवकोटाले सबै प्रदेशमा मेसिन गएको र त्यहाँ परीक्षण सुरु भएको भए पनि ‘भ्यालिडेसन’ आवश्यक पर्ने हुँदा नमुना पुनः परीक्षण गर्नुपर्ने बताए। केही शंकास्पद केसको परीक्षण केन्द्रीय प्रयोगशालामा भएपछि मात्र यकिन हुने प्रष्ट पार्नुभयो ।
बिहीबार मात्र एक महिलामा कोरोना पुष्टि भएको थियो। बिहीबार पुष्टि भएकी संक्रमित ६५ वर्षीया महिला चैत ४ गते कतारको दोहाबाट आएको क्यूआर ६५२ को फ्लाइटमा काठमाडौं आएकी थिइन्। यसअघि यही विमानमा आएका दुईजनामा कोरोना पुष्टि भएको थियो।
डा. देवकोटाका अनुसार टेकुस्थित शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पतालमा २ जना, बागलुङस्थित धौलागिरी अस्पतालमा २ जना र एक जना धनगढीस्थित सेती प्रादेशिक अस्पतालमा १ जनाको उपचार भइरहेको छ। उनीहरुको स्वास्थ्य अवस्था सामान्य रहेको बताइएको छ।
गण्डकी प्रदेशमा कोराना भाइरसको प्रगोगशाला स्थापना भएपछि प्रदेशस्तरीय कोरोना रोकथाम समितिका संयोजक मन्त्री किरण गुरुङले एकजनामा पोजेटिभ रिपोर्ट देखिएको मिडियाहरुलाई बताएका थिए ।
पछि उनैले फेसबुकमा स्टाटस लेखेर आफ्नै प्रतिक्रियाको खण्डन गरे ।
त्यतिमात्र होइन, गण्डकी प्रदेश मुख्यमन्त्री कार्यालयको आधिकारिक बेवसाइटमै कुल संक्रमितको संख्या ७ भनेर अपडेट गरियो थियो । र, त्यही आधारमा मिडियाहरुले पोजेटिभ रिपोर्ट आएको समाचार दिए ।
तर, स्वास्थ्य मन्त्रालयले बेलुका ४ बजे गरेको पत्रकार सम्मेलनमा आजका मितिसम्म पोजेटिभ रिपोर्ट नभेटिएको भन्दै मेसिनहरुको भ्यालिडेसनको कुरोसमेत उठायो ।
हेर्नुहोस् मुख्यमन्त्री कार्यालयको वेबसाइटको स्क्रिनशट, जुन अहिले प्रदेश सरकारले हटाएकाे छ